नेपाल टेलिकमको मोबाइल एप परिमार्जन - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
नेपाल टेलिकमको मोबाइल एप परिमार्जन
जेठ २७, २०७५ 833 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
नेपाल टेलिकमले आफ्नो मोबाइल एप परिमार्जन गरी नयाँ रूपमा सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ एपमार्फत टेलिकमका जिएसएम, सिडिएमए, पिएसटिएन र एडिएसएल लगायत सेवाको जानकारी पाउन सकिन्छ ।
एपमा लग इन गर्नासाथ मोबाइलमा भएको ब्यालेन्स रकम तथा टेलिकमको प्याकेज खरिद गरेको भए सोबारे जानकारी प्राप्त हुन्छ । पछिल्लो समय विभिन्न प्रकारका प्याकेज खरिद गरी सेवा उपभोग गर्ने प्रचलन बढ्दै गएकाले विशेष गरी त्यस्ता प्याकेज खरिद गर्न एपबाट सहज हुने टेलिकमको दाबी छ ।
यसैगरी, एफएनएफ सेवाबाट आफूले चाहेका ५ नम्बरमा सस्तो दरमा कल गर्ने सेवा पनि सुचारु गर्न सकिने जनाइएको छ । विभिन्न सेवाको आवश्यक रकम रिचार्ज गर्न र जीएसएम प्रिपेडबाट ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्नसमेत यसबाट सहज हुनेछ ।
पिन कोड राखेर वा रिचार्ज कार्ड स्क्यान ९स्क्यान एन्ड्रोइडमा मात्र हुने) गरेर पनि रिचार्ज गर्न सकिन्छ । एपमार्फत आफ्नो मोबाइलबाट टेलिकमको कुनै अर्को मोबाइलमा विभिन्न प्याकेज गिफ्ट दिन सकिन्छ ।
रिचार्ज कार्डबाट कम्पनीका विभिन्न सेवाको बिल भुक्तानी पनि यही एपमार्फत गर्न सकिन्छ । कम्पनीको फेसबुक लगायतका सोसियल मिडियासमेत यहीँबाट प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
टेलिकमका अनुसार एपबाट १००, १०१, १०२ जस्ता इमर्जेन्सी नम्बर डायल गरी आवश्यक सेवा लिनुका साथै १९७, १४९८ नम्बरमा डायल गरी कम्पनीका विभिन्न सेवाबारे जानकारी लिन सकिन्छ । उक्त एपमा कम्पनीले उपलब्ध गराउदै आएका सम्पूर्ण सेवाको महसुल दरबारे जानकारी हुनेछ । गुगल प्ले स्टोर तथा एप्पल स्टोरबाट एप डाउनलोड गरी टेलिकमको मोबाइल नम्बरमार्फत रजिष्टर गरेपछि एप चलाउन सकिन्छ ।